राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसः मेयर र सीडीओ दुई धारमा, सदरमुकाममै अलग–अलग कार्यक्रम ! « NBC KHABAR
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसः मेयर र सीडीओ दुई धारमा, सदरमुकाममै अलग–अलग कार्यक्रम !
इनरुवा । ६९औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीय तहमा समेत दिवसका अवसरमा प्रभातफेरी देखि अन्र्तकृया र गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम भएका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले आफू नेतृत्वमा रहेर दिवसका अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदा कतैकतै भने सरोकारवालाबीच समन्वय गरी दिवस मनाइएको छ ।
इनरुवा नगरपालिकामा समेत प्रभातफेरी, फलफुल वितरण र गोष्ठीको आयोजना गरी दिवस मनाइयो । सन्दर्भ प्रजातन्त्र दिवस थियो यद्यपी एकै स्थानमा फरक दुई कार्यक्रम आयोजना हुँदा इनरुवा नगरपालिकामा मनाइएको दिवस दुई चिरामा बिभाजित देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको अगुवाईमा एकथरीले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा दिवस मनाईरहँदा नगर प्रमुख राजन मेहता अगुवाईको टोलीले अस्पतालमा फलफुल वितरणसहित सभाको आयोजना गरी दिवस मनाएको छ ।
बसचौकमा रहेको शहीद गेटमा भेला भई प्रभातफेरी गर्दै इनरुवा अस्पतालमा पुगेर फलफूल वितरण पश्चात जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पुगेर समापन गर्ने गरी तय भएको प्रजातन्त्र दिवसको कार्यक्रम एकाएक दुई फरक धारमा बिभाजित मात्र हुन पुगेन् । नगर प्रमुख र प्रजिअको नेतृत्वमा विभाजित देखिएको दुई समूहले बेग्लाबेग्लै तवरले कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाइयो ।
प्रजिअ सहित सुरक्षा निकाय र कर्मचारी सम्मिलित टोलीले बसचौकबाट प्रभातफेरी निकालेर जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिषरमा मनतब्यको कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । जिसस उपप्रमुख कृष्णकुमारी विश्वकर्माको उपस्थितीमा दिवस मूल समारोह समितिले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदा सीमित वक्ताले दिवसको सन्दर्भमा धारणा राखे । सो कार्यक्रमलाई प्रजिअले सम्बोधन गर्दै समापन गरेका थिए ।
जिसस प्रमुख गोपालराज भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यक्रम तय भएको भएपनि समन्वय समितिमा आयोजित कार्यक्रमको अन्तिम समयमा उनी त्यहाँ पुगेनन् । उनका स्वकिय सचिव अच्युत भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य समस्याका कारण प्रमुख भण्डारी कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित हुन नसकेका हुन् । कार्यक्रम चलिरहँदा उपप्रमुख भने जिससमा पुगेकी थिइन् ।
असन्तुष्ट देखिएका नगर प्रमुख राजन मेहता सहितको टोलीले भने शहीद गेटमा माल्यार्पणसँगै प्रभातफेरी आयोजना गरी इनरुवा अस्पतालमा उपचाररत बिरामीलाई फलफूल वितरण गरी दिवस मनाइयो ।
दिवसलाई जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीको अगुवाईमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको थियो । स्वयं जिसस सुनसरी प्रमुख गोपालराज भण्डारी, प्रजिअ प्रेमप्रकाश उप्रेती सहित नगर प्रमुख राजन मेहताबीचको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलले सो निर्णय गरेको बताइएको थियो ।
यद्यपी प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सन्दर्भमा आयोजक र समन्वयकर्ताबीच देखिएको तिक्तताले दुई फरक धारमा कार्यक्रम आयोजना भएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उप्रेतीले समयमा नगर प्रमुख तोकिएको स्थानमा उपस्थित नभएपछि आफुहरुले प्रभातफेरी सुरु गरी जिससमा पुगेर औपचारिक कार्यक्रम गरेको बताए । कार्यक्रम सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा आइपुगेका मेयर मेहता कार्यक्रममा सहभागिनै नभई फर्किएको उप्रेतीले बताए । आफुहरुले मूल समारोह समितिको तालिका अनुरुप रहेर तोेकिएको समयमा कार्यक्रम आयोजना गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाएको प्रजिअ उप्रेतीले बताए ।
यता नगर प्रमुख राजन मेहताले आफुहरुलाई जानकारी गराइएको समय र कार्यक्रम तालिका भन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम गरिएपछि आफुले असन्तुष्टि जनाएको प्रतिकृया दिएका छन् । आफुहरुलाई ८ बजेकालागि बोलाएर ७ः३० मै कार्यक्रम गरिएपछि नगरपालिकाले बेग्लै कार्यक्रम गरेको मेहत बताए ।
शहीद गेटमा पुग्दा प्रजिअ सहितको टोली हिंडिसकेको थियो । अस्पतालमा फलफूल वितरण गरिएन । जिसस पुग्दा समापन कार्यक्रम चलिरहेको देखेपछि फर्किएर पूर्वतालिका बमोजिम आफूले दिवस मनाएको नगर प्रमुख मेहताले बताए ।
मेहताले कार्यक्रम बेग्लाबेग्लै आयोजना हुँदा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन पुगेको बताए । यस्ता खाले कार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फाँटो उत्पन्न गराउने हुनाले आपसी तालमेल र समन्वय बेगर कार्यक्रम गरिए स्थानीय सरकारको हैसियतले आफू समेत सोही अनुरुप बढ्न बाध्य हुने भन्दै उनले आक्रोस समेत पोखेका थिए ।
एउटै ब्यानरमा एकसाथ कार्यक्रम गर्ने गरी समन्वय र सहकार्यमा तय भएको कार्यक्रम भिन्नाभिन्नै तवरले आफू पायक रुपमा गरिएको विषयलाई जिसस सुनसरीले भने समन्वय अभाव भनेको छ । सामान्य त्रुटी र आपसी तालमेलका कारण सो अवस्था सृजना हुन पुगेको उसले स्वीकारेका छन् ।
सदरमुकाममा प्रजातन्त्र दिवसलाई इनरुवा नगरपालिकाले आयोजना गर्ने र जिससले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी तय गरिएको थियो ।